Mpanamboatra fefy vonjimaika, mpamatsy - China mpanamboatra fefy vonjimaika
Ny tontolon'ny fefy rohy maharitra sy fantsom-pifandraisana vonjimaika dia namboarina tamin'ny fampiasana teknika mahazatra (bara fihenjanana sy tarika fihenjanana eo ankavia sy ankavanana, mifamatotra amin'ny tariby mifatotra ambony sy ambany) ary ireo fitaovana voalohany. Ny rojo dia mampifandray fefy vonjimaika RAFITRA afaka manomeza fametrahana sy famotehana mora vidy mba hitsimbinana fotoana sy vola. ny rohy Ny tendron'ny fefy vonjimaika dia miposaka eo ambonin'ny havoan'ny tontonana, ary mifatotra eo an-tampony miaraka amin'ny kofehy amin'ny lasely mba hanomezana tsipika fefy malalaka izay lava sy halavany.
Fefy TEMPORARY VOALOHANY
Ilay fefy vonjimaika nohosorana dia antsoina koa hoe fefy azo entina, fefy azo esorina ary fencing finday. Mora ny mametraka sy mandrava, noho izany dia mety mandritra ny fotoana fohy ampiasaina. Ny fefy vonjimaika nohosorana dia misy takela-by, clamp, fotony vita amin'ny plastika na fotony metaly, fefy vonjimaika sasany namboarina dia azo ampifandraisina amin'ny tariby misy barbita ihany koa, ho an'ny fiakarana an-tampony. Ny takelaka misy fefy vonjimaika dia ny ampahany lehibe indrindra amin'izy ireo, noho izany dia tokony hamboarina amin'ny fomba henjana sy firafitra mafy izy ireo.
Ny sakana amin'ny fanaraha-maso ny valalabemandry, izay antsoina koa hoe sakana fanaraha-maso ny vahoaka, sakana amin'ny fomba frantsay, fitoeran-bisikileta vy, ary sakana amin'ny fikosoham-bary, dia matetika ampiasaina amin'ny hetsika maro.
Ny sakana fanaraha-maso ny vahoaka dia vita amin'ny vy mavesatra vita amin'ny vy mafana. Ny sakana amin'ny fanaraha-maso ny valalabemandry dia mahomby indrindra rehefa mifampitohy izy ireo, mifamatotra amin'ny andalana iray amin'ny alàlan'ny farango amin'ny sisin'ny barazy tsirairay. Rehefa mifamatotra ny barazy fanaraha-maso ny vahoaka, ny mpiambina dia afaka mamorona tsipika tsy azo idirana, satria ny tsipika misakana toy izany dia tsy mora ravana.